AMD Ryzen 5 1500X uye 1600X CPU Ongororo - WebSetNet
Homepage / X CPU Ongororo / AMD Ryzen 5 1500X uye 1600X CPU Ongororo
Kuuya nekuchimbidza kuseri kwemukoma wayo mukuru isu tine Ryzen 5. Izvi ndizvo AMD's inopa kune yakawanda bhajeti-inofunga PC mushandisi. Nhasi tichave tichitarisa hex-core 1600X uye iyo quad-core 1500X. Aya maCUUs maviri ane tekinoroji yeXFR yatakaona kubva ku Ryzen 7 1800X uye 1700X kubvumira kukurumidza kumhanya pamusoro peyakajairika max. Pasina imwezve adieu, onai kune huru show.
Tichitarisa patafura yakatarwa pazasi, iyo 1600X iri hex-musimboti ine SMT yezere tambo gumi nembiri uye iyo 1500X iri quad-core ine SMT yetambo sere. Iyi yakazara yepakati / tambo kuverenga inouya kubva mukushandiswa kwemaviri CPU Complexes (CCX), zvimwe pane izvi kurongeka mune yechipiri. Iyo base wachi inopinda mu3.6 GHz uye ichawedzera macores maviri (tambo ina) kuenda ku4.0 GHz ye1600X uye 3.5 GHz inokwidziridza ku3.7 GHz pane 1500X. Iko kuiswa kweXFR (Xtended Frequency Range) tekinoroji inobvumidza imwe 100 MHz (200 MHz yeiyo 1500X) pamusoro pese hwaro hwekusimudzira uye kusimudzira, kana tembiricha ichibvumidza. TDP yeaya maCUU maviri anouya mu95 W yeiyo 1600X uye 65 W yeiyo 1500X. Iyo inotonhorera yepakati pakati pefa neHS is solder, pachinzvimbo chekupisa poda seIntel yakashandisa pane yavo Mainstream CPUs.
Mubvunzo uri pamiromo yemunhu wese maererano neRenzen 5 wave uri "AMD ichaita sei kudzikisira kuverenga kwakadzika?" uye ini ndinogona kukuudza kuti ivo vanozoenzana pakati peCCX's. Iyo Ryzen 5 1600X ine maCCX maviri ane macores matatu akagoneswa pane imwe neimwe. Iyo Ryzen 5 1500X ine maCCX maviri ane macores maviri akagoneswa pane imwe neimwe. AMD iri kuichengeta iri pakati nepakati uye vachishandisa yavo yekusarudzika musimboti inokanganisa mashandiro kudonhedza iyo yepakati kuverenga.
Magadzirirwo Ryzen 5 1600X Ryzen 5 1500X
L2 Cache 3 MB (512 KB pamusana) 2 MB (512 KB pamusana)
L3 Cache 16 MB (8 MB neCCX) 16 MB (8 MB neCCX)
Makore maviri (Four Threads) Akachengetwa 4.0 GHz 4.1 GHz
Rimwe Core (Two Threads) Rakatakurwa 4.0 GHz 4.1 GHz
Pazasi pane mimwe mifananidzo kubva ku AMD yeiyo chigadzirwa kurongedza kweiyo nyowani Ryzen 5 CPUs. Iyo 1600X haina inotonhorera nayo, iyo 1500X inouya naWraith Spire (inoratidzwa gare gare).
Retail Mabhokisi - Kumberi Mabhokisi Ekutengesa - Kumashure
Tichitarisa iyo Wraith inotonhorera, isu tinoona imwe yakawanda kupfuura yaive mubhokisi rekutengesa! AMD zvakare yakapa iyo Wraith Max yezvinangwa zvekuyedza, izvo zvandichazosvika mune inotevera chinyorwa. Kuruboshwe kune iyo Wraith Spire iyo yaisanganisirwa neiyo 1500X.
Wraith Spire naMax - Pamberi Wraith Spire naMax - Shure
Tevere kumusoro mifananidzo yemaviri maRenzen 5 sampuli yatinayo, kumberi uye kumashure Ini handioni musiyano unonzwisisika pakati peCPUs kunze kwekumaka laser pane IHS.
AMD Ryzen 5 CPUs - Pamberi AMD Ryzen 5 CPUs - Kumashure
Iyo data ratakatora rinotipa isu rakakura zano rekuita kwaro zvese muzvitoro (hapana turbo), uye inowirirana mawowpepepe kuona IPC kuita mutsauko pakati pavo vese. Ini ndasanganisira Kaby Lake mhedzisiro ne i7-7700K, iyo hex musimboti HyperThreaded Haswell-E i7-5820K, uye mukuru-mukomana Ryzen 7 1800X.
Motherboard GIGABYTE Z270X-Gaming 8 ASRock X99 OC Formula ASUS Crosshair VI Gamba
ndangariro Corsair Vengeance LPX 2 × 8 GB DDR4-3000 15-17-17-35 Kingston Hyper X 4 × 4 GB DDR4-3000 15-15-15-35 G.SKILL Trident Z 2 × 8 GB DDR4-3866 18-19-19-39
Magetsi EVGA SuperNova G2 850 W EVGA SuperNova G2 750 W EVGA SuperNova G2 850 W
kutonhora CoolerMaster Glacer 240L Custom Loop ne EK LTX CPU Block uye 5.120 Radiator Tsika Loop ine Alphacool XP3 uye 3.120 Radiator
Kumusoro kumusoro ndiyo MSI B350 Tomahawk mamaboard akatumirwa ne AMD mune yavo yekuchengetedza package, inoita kunge yakanaka bhajeti mamaboard eRyzen. Iri bhodhi rinozvirumbidza yechitanhatu-chikamu VRM, yakasarudzika odhiyo chikamu, uye yakawanda yekubatanidza maficha. Pane zviratidziro zvinobuda paTomahawk, zvichibvumira iyo Ryzen-based APU kuti ishandiswe gare gare mumugwagwa. Pair izvi nechimwe chinhu kubva kuRenzen 5 lineup, ine hunhu GPU, uye iwe uchave unonakidza mutambo wekutamba uchivaka pasina kutyora bhangi.
Iyo Geil "Hardcore Gaming Memory" yakatumirwa ne AMD kunobva kune yavo RGB mutsara. Ngwarira shongwe yemhepo inotonhorera hazvo, izvi zvimiti zvakakura zvisingaite. Izvi zvinoda simba rekunze reiyo RGB maLED, ichivachengeta kubva kunotora mamwe masimba pamusoro peiyo DIMM slot.
Mushure mekuedzwa, isu takabva tashandura kuenzanisa AMD neIndel zvese zvose panguva imwecheteyo (4 GHz). Iyi kuedzwa ichaita nyama kubva musiyano muMirayiridzo Per Clock (IPC) pakati pe sampuli. Izvi zvinoshanda zvakare kumitambo yemitambo.
Ndokumbira utarise, ndakamhanyisa bvunzo dzese dze1800X yemhedzisiro inowirirana inogoneka. Nenzira iyi mhedzisiro yese yeRenzen yaunoona pano iri paCrosshair VI neiyo BIOS yazvino, kutonhora kumwe chete, uye zvakafanana Windows 10 inogadziridza. Kazhinji ndingadai ndisina kuita izvi, asi neyakagadzirwa nyowani yekuvandudza iyo yekuvandudza / tweaks / fixes (zvese muBIOS uye Windows) anokurumidza-moto.
Kumusoro kutanga, iyo AIDA64 CPU bvunzo. Aya maedzo ari pa AMD / Intel base wachi kumhanya yakanyorwa. Tinogona kuona iyo 1500X uye 1600X ichiita kuratidzwa kukuru kurwisa iyo 7700K uye 5820K pano, ichiuya mukutengesa kurova kuburikidza naMambokadzi, PhotoWorxx, uye Zlib. Hash mamaki ari kure nekupfuura i7 nekuda kwekushandiswa kweSHA yekuwedzera. Bvunzo dzeAES dzinoshandisa zvimwe zvakanaka zvekuvakwa kweZen, ndosaka nzira dzeIntel dzichienda ikoko.
Tevere tinoona iyo FPU bvunzo. MuVP8 yakawanda yekuyedza yaive padyo neyakaenzana nekuda kwayo ichingoshandisa kusvika kune tambo nhanhatu, izvi zvakaita kuti nguva yekumhanyisa kwemaawa iratidzike. MuJulia naMandel kupenya kweIntel CPU nekuda kwezvimwe zvipingamupinyi zveZen, zvakanyanya kupenya kwakaita AMD pamusoro muAES neHash. SinJulia yakavakirwa pane yakasarudzika x6 yekurayira yakatarwa, asi isu tinogona kuona kuti cores inoyera sei bvunzo iyi pano.
Iwo ekuyeukwa kwendangariro anonyanya kutaura ega. Isu tinogona kuona kubatsirwa kwequad-chiteshi pane iyo 5820K, asi zvikasadaro iwo akanaka akatsetseka seti yemhedzisiro. Memory latency yakati rebei paRenzen parizvino, asi maTIOS tweaks ari kushanda pane izvo. Ngatitaurei kuva vakatendeseka pano, ruzhinji rwevashandisi havazombo cherekedza iyo yekuwedzera 20-30 ns sezvo akawanda mashandisirwo emamiriro asiri ekumanikidza kurangarira.
Mune inotevera seti yekuyedza iyo 1600X yakanyatso kumira kwandiri. Mune bvunzo dzese kunze kweX265 yakarova zvese zvinopihwa neIntel, chete iyo 7700K yakakunda pamusoro peiyi bvunzo maererano ne1600X. Iyo 1500X yainyanya kugara 15-20% kuseri kwe7700K pano, iri rakakura tichifunga nezvemakwikwi akanangidzirwa ayo i5.
MuSuppPi kumhanya kwe wachi uye Intel's IPC mukana wakanyatso kuratidza nekuda kwekuti uri muyedzo mumwe chete. MuWPrime kunyangwe iyo 1600X yakauya ikatamba nezvose zviri zviviri Intel zvipiro zvaonekwa nhasi.
Kungori chiyeuchidzo, bvunzo dzese kubva apa kuenda kumberi dzine maCPU ese anomhanya pa4GHz pachinzvimbo chekumhanya kwavo kwemasheya. Uye sezvataitarisira, mhedzisiro mhedzisiro yemitambo yaive mukati memahara ekukanganisa kweumwe neumwe. Musiyano chete unonyanya kukosha pano uri muAshes DX12, iyo yakagadziridzwa yeRenzen ikozvino uye inogona zvakare kushandisa akawanda macores.
Mazhinji emapoinzi misiyano pano mu3MMark Moto Strike Yakanyanyisa yakauya kubva pakuyera kwema cores muFizikisi bvunzo. Rangarira kubva kuongororo yangu ye1800X kuti SMT inoshanda zvakadii kupfuura HT, tinoona bhenefiti pano apo 1500X ine yakakwira yeFizikisi mamaki kupfuura iyo 7700K. Ziva zvakare iyo 1600X yakanga iine yakakwira Physics mamaki kupfuura iyo 5820K!
Mumusoro medu kumusoro misoro, isu takamhanya ese masisitimu ku4 GHz. Izvi zvinoratidza mutsauko muIPC uye cores zvakananga. Pakazara, isu tinoona yakanaka kuyera kana uchisimudza iyo CPU kumhanya. Ini ndakanyatso kufadzwa nemaitiro akaitwa ne1600X padhuze ne5820K nepo kumhanya kwemawachi kwakaenzana, zvakanaka kuona ichiri kutengesa zvibhakera.
Kumusoro kutanga nekusundira iyo inopfuura mberi ndeye 1600X. Yakasvika pa max kumhanya, pane ese macores uye tambo, ye4125 MHz. Izvi zvaive zvichimhanya DDR4-3200 16-15-15. Pazasi pane skrini inomhanya Cinebench R15 uye SuperPi 1M pakumhanya kwakakwira. Paive nezvakanaka kuwana pamusoro pemhedzisiro yapfuura.
Kuti ndienderere mberi apa, ndakamhanyawo 3DMark Fire Strike Yakanyanyisa zvakare pane aya marongero akakwirira. Zvirongwa zveGPU zvakaramba zvakafanana nekuyedza kwemitambo pamusoro. Mazhinji emhindu pano anga ari muchikamu chefizikiki. Yakaenda kubva ku18313 kusvika 18978 pano!
Tevere ndakashandura screws pane iyo 1500X kwechinguva. Yakasvika pa max kumhanya, pane ese macores uye tambo, ye4050 MHz. Izvi zvaive zvichimhanya DDR4-3200 16-15-15. Pazasi pane skrini inomhanya Cinebench R15 uye SuperPi 1M pakumhanya kwakakwira. Zvakare pane iyi CPU shanduko muzvakawanda yainakidza.
Kuti ndienderere mberi apa, ndakamhanyawo 3DMark Fire Strike Yakanyanyisa zvakare pane aya marongero akakwirira. Zvirongwa zveGPU zvakaramba zvakafanana nekuyedza kwemitambo pamusoro. Zvekare, yakawanda yekuwana pano yaive muchikamu chefizikiki. Yakaenda kubva ku13338 kuenda ku13592 pano!
Ref_clk ndeye 100MHz.
AMD Ryzen Tenzi v1.0.1
AMD ichangoburitswa v1.0.1 yeRyzen Master, heano shanduko huru kune software:
Ryzen Master ikozvino inoshuma tembiricha yekusangana, pane TCTL. Ona iyo "tembiricha yekuzivisa" chikamu che iyi blog kune mamwe mamiriro pane TCTL.
Iyo yekumisikidza haichagone kana kuda HPET kana Ryzen Master yaiswa nehurongwa inomhanya iyo AGESA 1.0.0.4-based BIOS. Ona iyo "ngatitaurei nezve BIOS inogadziridza" chikamu che iyi blog kune zvimwe mamiriro pane AGESA 1.0.0.4.
Pano tinoona fananidzo yesimba rekushandisa kwesisitimu yakazara yeiyo 1500X, 1600X, uye 1800X ese ari kumhanya ese ari maviri base kumhanya uye akakiyiwa pa4 GHz. Izvi zvese zvakaitwa pamwe chete neiyo GPU marongero, mamaboard, BIOS, kutonhora, uye nhamba yeva fan saka chero misiyano pano ingori nekuda kwekukosha kuverenga uye wachi kumhanya.
Sezviri pamusoro negirafu remagetsi, uku kupararira kwetembiricha kunomiririra 1500X, 1600X, uye 1800X zvese zvinomhanya zvese zviri zviviri base kumhanya uye zvakakiyiwa pa4 GHz. Izvi zvese zvakaitwa pamwe chete neiyo GPU marongero, mamaboard, BIOS, kutonhora, uye nhamba yeva fan saka chero misiyano pano ingori nekuda kwekukosha kuverenga uye wachi kumhanya.
Tarira: Aya tembiricha akatorwa neRyzen Master pasati pasunungurwa v1.0.1.
Zvakanaka, mashandiro acho anoshamisa zvinoshamisa. Iyo 1500X, kazhinji, inoitwa pamwe neiyo i7-7700K. Kunyangwe iwe uchigona kupfuudza iyo i7 kumberi, iyo MSRP yeiyo Ryzen 5 1500X ingori $ 189 chete. Ndiwo musiyano unotyisa mumutengo / kuita. Zvakwana kutora mutambo wekuvaka kubva pa GTX 1060 to GTX 1070, nezvimwe. Iwe unozoona iyo GPU zvakanyanya kupfuura kudonha kushoma mukuita kweCPU. Ipapo iyo Ryzen 5 1600X irikuita mushe pamusoro peiyo i7-7700K uye ichinyanyisa kuita iyo i7-5820K mune chero chinhu chakakoshwa-tambo wakabata zvakaenzana mukuita kwemitambo. Zvekare, MSRP inoita basa rakakura pano ne1600X inouya iri $ 249, mutengo weiyo i5-7600K parizvino.
Tembiricha inodzorwa zviri nyore, kunyanya pa1500X, uye mashandisiro emagetsi mashandisiro zvinoshamisa pasi. Kana tangoona yakatowanda BIOS uye OS tsigiro ichibuda kuitira Ryzen kuita, kugadzikana, uye kuenderana kucharamba kuchingove nani.
Ryzen 7 yakaitwa zvisingaite, asi Ryzen 5 ndiyo processor yevanhu. Matanhatu epakati i7 mashandiro emutengo i5.
AMD Ryzen 5 1500X uye 1600X CPU Ongororo inzvimbo kubva: Overclockers - The Performance Computing Community
Makore maviri Gare gare: AMD Ryzen 7 1800X vs. Intel Core i7-7700K
AMD Ryzen 5 1600 / 1600X vs Core i5 7600K ongororo
Posted in X CPU Ongororo
Muchizvikudza dzinofambiswa ne WordPress / Dingindira: Superfast